Xaaf oo dib ugu laabtay Dhuusa-Mareeb, kana hadlay warar suuqa ku jiray. | XAL DOON
Home NEWS Xaaf oo dib ugu laabtay Dhuusa-Mareeb, kana hadlay warar suuqa ku jiray.
Xaaf oo dib ugu laabtay Dhuusa-Mareeb, kana hadlay warar suuqa ku jiray.
Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, ayaa xalay dib ugu laabtay magaalada Dhuusa-Mareeb ee xarunta Galmudug, halkaasoo mar kale dib loogu soo dhaweeyay.
Xaaf ayaa ka yimid magaalada Gaalkacyo oo uu ku tagay safar deg deg ahaa, waxaana soo baxayay warar la xiriira inuu ka carooday madaxweyne Qoor Qoor, inkastoo wararkaasi uu meesha isaga baxay.
“Dad badan ayaa siyaabo kala duwan u dhigay safarka Madaxweynaha balse waxaanu u cadeyneyna in arimo gaar u ah isaga uu u baxay Madaxweynuhu dibna ugu soo laabtay Caasimada” ayaa lagu yiri Warka kasoo baxey Xaaf.
Mr. Xaaf ayaa lagu wadaa inuu dhawaan ka qeyb galo xaflad kooban oo la filayo inuu xilka si rasmi ah ugu wareejiyo madaxweynaha dooran ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor, iyadoo kadibna la isla sii aadi doono sidii uu ninkan Villa Somaliya wadato u soo magacaabi lahaa golihiisa Wasiirada.
Waxaa jira balanqaadyo loo sameeyay Axmed Ducaale Geele Xaaf oo ay qeyb ka tahay mid Maaliyadeed iyo mid xilal la xiriirta, isagoo dalabaadkaas hore u soo bandhigtay si uu heshiis ula galo maamulka cusub ee Galmudug.